Norwood icompany eyakha amasaha ombhese | Portable Sawmills and Forestry Equipment
|+27 82 878 8524
uMshini wokusaha ophathekayo maskembe
Norwood icompany eyakha amasaha ombhese
Norwood uMshini wokusaha ophathekayo
Imishini emihle yamasaha engaduli ongenza inzuzo ukuze wakhe ibhizinisi
Iba umholi emphakathini wangakini.
Khiqiza iplangwe wakhe inzuzo ngebhizinisi.
Gcinela izizukulwane amahlathi ase Afrika.
Ungazuza konke lokhu nokunye, ngokuba ube ne Norwood band sawmill ethi wena…
Kanjani? Funda kabanzi…
Ngokugquqguzela ukwenziwa kwezingodo endaweni yangakini, ngokwenza inguquko ekuqashweni kwabantu, nokukhulisa umnotho emphakathini.
Uma ukhiqiza ingodo uzenza amaplwangwe, namaplangwe okufulela. Ukhuphula intengo ye plangwe ngendlela exakile, uwadayisele abakhi bezindlu, abakhi be fenisha, Kanye nabenza imisebenzi yezandla, njengamakrafti, kanjalo kanjalo…
Ngokukhethekile khulisa izihlahla ukuze wehlise izinga lomonakalo nodoti oshiwa izinkampani ezinkulu zama China ezenza amaplangwe.
Okunye, I Norwood bandmills isebenzina imibese yamasaha yochwephese ezacile ebukhali. Lokhu kusho ukuthi imibese yamasaha ezacile yenza idasidi encane kakhulu uma usika, futhi ikunika amanani amaplangwe amaningi ukuthi uwadayise. Funda kabanzi ngezansi kungani uzokhetha ukusebenzisana ne Norwood sawmills
Kungani amasaha aka Norwood Sawmills ekulungele? Nazi izizathu….
Amaplwangwe ase Afrika aqinile (amaplangwe ensimbi, (amaplangwe omsizi), izinkuni, neplangwe la mahogany, kanjalo kanjalo…..) Amaplangwe aqinile emhlabeni. Amaplangwe ase Afrika akhiqiza imisebenzi emikhulu kanjalo nanzima. I Norwood Sawmill yakhiwe ngobuchepheshe bobunjiniyela ngokwesimo saseAfrika.
I Norwood yinkampani enkulu emhlabeni jikelele enamasaha aphathekayo, asasungulwa eminyakeni eyama shumi amabili nanhlanu (25) eyadlula.
Ziningi izizathu zokuthi kungani I nkampani I Norwood sawmills ikulungele ngendlela amangalisayo -
I Norwood iyinkampani ehamba phambili ngokusungula amasaha aphathekayo ngokungephikiswa. Ubufakazi?
- Zingaphezulu kwamashumi amahlanu (50) izinkampani ezisebenzisana ne Norwood. Lokhu kwenza zibe ngaphezulu kuzo zonke izinkampani ezenza amasaha emhlabeni wonke sezihlangene!
I Norwood ikhiqiza ubuchwepheshe okusika kanye kwenze iziqgumbi zamaplangwe ogodweni. Ngokunciphisa ukusebenzisa umshini, ngokusheshisa ukukwenza ngesikhathi nokunyuka kwenani, I Norwood sawmills is khiqiza kakhulu yenze nenzuzo emangalisayo kunezinye izinkampani.
Yonke imikhiqizo yamasaha aka Norwood akhelwe ukumelana nokunquma izingodo nokwakha amaplangwe nsuku zonke, nezinga lokhunda nokunakekelwa kwawo lincane kakhulu. Imikhiqizo yakwa Norwood sawmills kulula ukuyisebenzisa nokuyinakekela futhi izimele.
Imikhiqhizo yakwa Norwood sawmills isenza ngezinga eliphezulu yehlisa inani yamabhodi nama plangwe ayizingcucu. Udinga ukusika okuqondile ngisho nezigcucu ezincane, yilokho I Norwood sawmills eyakhelwe kona.
Imikhiqizo yakwa Norwood sawmills ayibizi nakancane. Nhokweqiniso umaqhathanisa ubuso no buso nokukhiqizwa kokwakhiwa nokuqina, I Norwood sawmills igcono izihlulela kude ezinye izinkapmani eikhiqiza amaplwangwe.
Kubiza kancane ukuthwala izimpahla ngomkhumbi
I Norwood sawmills ihambisa umthwalo owodwa omkhulu ngomkhumbi ngalokho wonga izinkulungwane zemali yokuthutha impahla, sibonga ikhono lokupakaisha impahla. Okunye okuncomekayo ukuthi uyazixhumela umshini ukuze wazi ukuthi usebenza kanjani, okunye futhi kusiza ekunakekeleni nokuthola isiqiniseko sokuthola inzuzo.
Yazi kabanzi ngohlobo lomshini I Lumbermate LM29 -Iwona umshini owudingayo wokusaha e Afrika
Ukwazi ukunquma izingodo ezibanzi nezinkulu kakhulu-amaplangwe athemabile naqinile.
UkwaziUkwaziUnquma amaplwangwe abanzi kakhulu afika ku 56cm.
UkwaziUkwaziUnquma izingodo noma ezinde kangakanani-I Lumbermate LM29 inquma izingodo ezijwayelekile ezingu 3.8cm ubude, kodwa un gakwazi ukwenza ngesithebe esingu 1.2m ngendlela othanda ngayo, ukuze unqume izihlahla ezinde kahkhulu.
UkwaziUkwaziUkwaziUmshini ongwawuthemba okulula ukusebenzisa- Faka izingodo ngekhanda uziphushe kancane ukuze umshini uzinqume. Akufune ki amafutha nemishini kagesi yokuwu nakekela.
UkwaziUkwaziWakhiwe ngendlela wokuthi wonge isikhathiukhiphe umkhiqizo omningi- ikhanda lesaha lizivula lizivale lona. Akudingi ulokhu ulivula ulivala uma unquma.
UkwaziUkwaziUmbese wesaha ubanjwe amasondo awenza kwehle isidingo sokuwunakekela.
UkwaziUkwaziUfika nebhawodi lokubamba ugodo nendawo yokuthi lufike luhlale uma usilunqumile.
UkwaziUkwaziZiningi izinto ongazifaka emshinini uma uthanda:
a. Isithebe sokwengeza indawo yokunqumela ugodo siwu (1.2m sisinye)
b. Ungaxhuma inqola enamasondo nemlenze yokuzimela
c. Ungafaka isitebhisi sokulayisha ingodo nentambo/ iketanga lokuzidonsa
I LumberMate LM29 (Iyazimela)
Waphethiloli (16hp V-twin Vanguard)
I LumberMate LM29 (unenqola)
*Amanani abiza ngamaRandi atholakala enkamapnini yakwa EXW Norwood Sawmills e Roodepoort, eningizimi ne Afrika ayibaliwe intela. Amanani ayehla ayenyuka ngenxa yendleko zokuthutha impahla nezezimali zamabhizinisi akhuphuka ngaphandle kwesaziso.
Udinga umshini omkhulu kakhulu? Singakusiza ngalokjo!
I Norwood inhlobo lwemishini emikhulukazi yokunquma amaplangwe-khona I LumberPro HD36. Uma ingodo zakho zingaphezulu kuka 70cm, sibuze uma ufuna othe xaxa. I Norwood LumberPro HD36 yezingodo ezinkulu ezifika ku 91cm.
I Norwood Sawmills ila e Afrika… Nathi futhi!!
I Norwood inezinhlobonhlobo zamasaha la kugcinwa khona izimpahla kuma (wearhouse) amathathu zesendaweni okulula ukuzithola emazansi ne Afrika: e Ningizimi Afrika, Zambia, nase Uganda. Kulezindawo I Norwood ihambisa ngokushesha izipmaphla ngomkhumbi emazweni aseduzane. Ochephese abanolwazi ngalemishini bayatholakala kelezindawo.
Uma ufuna imibuzo yakho iphenduleke mayelana ne Norwood Sawmills, uthole amanani emshini enzelwe wena, noma ufuna uku oda imishini, thintana ne Norwood Sawmills Africa ngomqafazo noma ngocingo. Siphokophele ukukusiza ngezidingo zakho zemishini yamasaha.
Vakashela I Morwood Sawmills Afrika ezindaweni zokuxhumana ku: www.NorwoodSawmills.com/za.
+27 82 878 8524